ဘဝမှတ်တိုင်: Android APP တွေကို PC မှာသုံးရာမှာ Bluestackထက်ပိုကောင်းတဲ့ Tool တစ်ခု
Android APP တွေကို PC မှာသုံးရာမှာ Bluestackထက်ပိုကောင်းတဲ့ Tool တစ်ခု
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းAndroid ဂိမ်းတွေကို pc ပေါ်မှာဆော့ရာမှာ Bluestack တို့ youwave တို့ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် bluestack တို့ထက် ကောင်းမွန်တဲ့ tool တစ်ခုကို ကျွန်တော်ညွှန်းချင်ပါတယ်။
GenyMotion ဟာ Virtual box ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ Android emlator တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Developer အတွက် သူတို့ရေးထားတဲ့ apk တွေကို pc ပေါ်မှာပဲစမ်းသပ်ဖို့ အထူးသင့်လျော်တဲ့tool တစ်ခုပါ။
ဒီtool ကိုသုံးရာမှာ shapshot ဆိုတဲ့ option တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။သူက သင့်ရဲ့ device ကို shot ယူပြီးတဲ့ pc မှာ သင့်device ရဲ့ပုံစံအတိုင်း ဆော့ကစားနိုင်တာပါ။ဥပမာ သင်က Note3 ကိုင်ရင် pc ထဲမှာလည်း note3ရဲ့ပုံစံအတိုင်း interface ကပေါ်လာတာပါ။
GenyMotionမှာ ကင်မရာwiget လည်းပါဝင်ပြီးတော့ သင့် web cam ကို phone from or back cmaera အဖြစ်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တခြားAndroid emulators တွေထက် ပိုမြန်ပါတယ်။
android version အကုန်လုံးနဲ့ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။.
accelerometer နဲ့ other sensors( Pro version features)မှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
Superuser access ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသေးတယ်!
Google Services ကို offical support မလုပ်တာကြောင့် no google play ပါ။
system ပိုင်းနိမ့်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေအတွက်မသင့်တော်ပါ။အနည်းဆုံးတော့ ram 2gb ၇ှိရပါမယ်။
Setup guide for you to get Started running the GenyMotion on your computer
GenyMotion Windows, MAC and Linux သုံးခုကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
ခုကတော့ ၀င်းဒိုးအတွက်ပဲ ရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Installing GenyMotion on Windows:
Geny motion ကို free ရော pro ဗားရှင်းပါရရှိနိုင်ပါတယ် သူရဲ့ offical ဆိုဒ်ကတော့ here [official link] ပါ။register လုပ်ပြီး free ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
GenyMotion က Oracle Virtual-box installer နဲ့ Oracle VirtualBoxနဲ့မဟုတ်တာနှစ်မျိုးသုံးနိုင်ပါတယ်။ oracle virtualပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း install လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း install နိုင်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး Install လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ပုံမှန်ဆော့ဝဲတွေတင်သလိုပါပဲ။
Creating Virtual device on GenyMotion:-
install ပြီးရင် virtual box တစ်ခုဖန်တီးရမှာပါ။
အဲဒီအတွက် Genymotion မှာ + icon or press Ctrl+N နှိပ်ပေးပါ
ဒါဆိုရင် popup ၀င်းဒိုးတစ်ခုကျလာမှာဖြစ်ပြီး device တွေကို ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသင့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်က developer တစ်ယောက်မဟုတ်ရင် direct ပဲ device ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။သင့်ရွေးလိုက်တဲ့device ရဲ့ပုံစံအတိုင်း သင့်ကွန်ပျူတာ မှာ Android ကိုသုံးနိုင်မှာပါ။
ခနစောင့်ပေးလိုက်ပါ။ အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်လိုအပ်ပါတယ်။snapshot ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲတာပါ။
ပြီးရင်တော့ name တစ်ခုခုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးရင်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း play ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ မည့်သည်ဗားရှင်းမဆို android app တွေကို စတင် run နိုင်ပါပြီ
သင့် apk ကိုဘယ်လို ဆော့မလဲဆိုရင်တော့ လွယ်ကူပါတယ်။ သင့်ဆော့ကစားလိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို Drag ဆွဲထည့်လိုက်ရုံပါပဲဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ bluestack ထက်ဒီကောင်ကိုပိုကြိုက်ပြီး မကြိုက်တာကတော့ Google play ကို support မလုပ်တာပါပဲခင်ဗျာ...။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/20/2014 05:03:00 pm